Naharitra 05:56 ora ny dia, ka raha ny kajy natao dia nijanona tao Toliara nandritra ny 1ora mahery teo ny fiaramanidina.
Raha ny fanazavana ara-tekinika, dia ao Antananarivo sy Antsiranana ihany no misy Tracker de donnée ADS, na irony radara mahita ilay fiaramanidina irony, ka dia tsy hita izy rehefa tao Toliara.
Ary niverina nivantana tao Ivato ny andron'iny ihany ilay fiaramanidina rehefa niainga tao Johannesbourg tamin'ny 11h22 ary nigadona an'Ivato tamin'ny 17h21 raha ny antontanisa nomen'ny ADS n'ilay fiaramanidina rehefa nisidina teo ambonin'i Morondava.
Mipetraka izany ny fanontaniana eto hoe, aiza ny Tafika anabakabaka, aiza ny ACM manara-maso ny fifamoivoizan'ny fiaramanidina, tsy lazaina intsony moa ny andraikitry ny mpanamory, izay mahafantatra tsara ny zavatra nataony, sy ny tompon'ny Kaompania STA, izy manana ny plan de vol rehetra andehanan'ny fiaramanidina ao aminy.
Tsy afa-miala rahateo ny PAF sy Douane ao Toliara, raha tao izy ireo no namadika ny sidina anatiny ho lasa sidina iraisam-pirenena, nefa tsy afaka manao izany izy ireo satria misy ny fepetra ara-pahasalamana manidy ny sisitany, rahateo Toliara tsy seram-piramanidina iraisam-pirenena.
Mila mazava ihany koa ny ministeran'ny vola sy ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany amin'ny mety taratasy nentina amoahana ireto volamena ireto. Raha misy ny hosoka tamin'izany dia tsara ny mangarahara, satria fantatra fa ity mpanamory ity, dia manamory fiaramanidina ana minisitra ihany koa, fiaramanidina izay vao novidiany tsy ela izay.
Re fa misy tsindry sy antso ataon'olona ambony amin'ireo antanan-tohampahefana ampangina izao raharaha izao, fa re ihany koa fa entitra ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra manome baiko ireo tompon'andraikitra ambony, fa na iza na iza tafiditra tamin'izao trafika-na volamena izao dia ampiharina aminy ny lalàna.
Efa mandeha ankehitriny ny famotorana ireo olona maro eto Madagasikara, hatreto mbola tsy re iza avy no tafiditra amin'izany. Ny atsy Afrika atsimo ihany koa dia efa mandeha ny famotorana, ary hiakatra fitsarana tsy ho ela izy ireo.
Ny fitondrana Malagasy moa dia mangataka ny ampodiana ireo volamena 73.7kg an'ny Malagasy ireo, ary mangataka ny amerenana ireo Malagasy tafiditra amin'ity raharaha ity hitsarana azy ireo aty Madagasikara.
Vaovao hita an-gazety androany fa misy orinasa any Mali milaza fa azy ireo volamena ireo, fa ireto malagasy nitondra azy dia mpikarama fotsiny ihany, fa manana taratasy ara-dalàna avy amin'ny fitondrana malianina ireo volamena ireo .